Bilaogy Boliviana: Aleo tsy hotantanin’ny tsy miankina ny rano, sy lohahevitra hafa koa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2019 3:25 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny 22 Marsa 2006)
Nandritra ny Fihaonambe Manerantany momba ny Rano, nanambara i Bolivia fa tokony hiantohana ho toy ny zon'olombelona fototra ny rano. Miaraka amin'ireo firenena Amerikana Latina, nandresy lahatra ihany koa ny minisitry ny rano Boliviana vaovao mba tsy hampidirina ao anatin'ny fifanarahana ara-barotra malalaka ny fitantanan'ny tsy miankina ny rano. Nanatrika ny fihaonambe ilay bilaogera, Nick Buxton, izay manoratra matetika ao amin'ny Open Veins, anisan'ny solontena avy ao amin'ny minisitera natsangana vao haingana izy. Nanoratra hevitra sasantsasany tao amin'ny Red Pepper ihany koa izy.
Marcela Olivera, tale mpanampy ao amin'ny Foibe Demokrasia no vahiny mpanoratra ao amin'ny Blog from Bolivia. Naneho hevitra momba ny Andron'ny Rano Manerantany i Olivera, mpikatroka malaza eto amin'ity sehatra ity, tsy dia ankalazaina firy any amin'ny firenena fantatra amin'ny fifandonana amin'ireo orinasa marorantsana iraisam-pirenena izay nanao sonia fifanarahana hanome ny tolotra famatsiana rano hotantanin'ny tsy miankina izy. Mbola ho ela vao hivaha ny olana ary manontany izy hoe: “Ahoana no hamatsianao rano ho an'ireo izay mila izany indrindra ary tsy mila tanana fitantanan'ny tsy miankina?”
Tao an-tsain'ireo bilaogera Boliviana ihany koa ny loharano voajanahary hafa. Ohatra, mandrahona ny fanondranana saozaha (soja) avy any Bolivia ny fifanarahana ara-barotra malalaka vao haingana teo amin'i Etazonia sy Kolombia. Manoratra i Jonatan Olguin, izay nanapa-kevitra hanoratra farafaharatsiny lahatsoratra iray amin'ny teny Espaniola isaky ny avy manoratra lahatsoratra roa amin'ny teny Anglisy fa tsy ny tsenan'ny saozaha ihany no tsena tokana hijaly (ES) rehefa lany daty ny fifanarahana ATPDEA ary tsy misy fifampiraharahana fifanarahana (indray). Manontany ihany koa ny bilaoginy Journal of Bolivian Business and Politics mikasika ny fanoloran'ny Filoha Morales lalana hafa amin'ny fifanarahana ara-barotra malalaka, Mety hahomby ny “fifanarahana ara-barotra ataon'ny vahoaka” fa somary mandrebireby vahoaka kely izany fehezanteny izany.
Boliviscopio (ES) an'i Jaime Humérez Seleme indray manomboka amin'ny fomba fiteny taloha hoe “Manasazy tsy misy vato, na tehina Andriamanitra”, ary mampitaha izany amin'ny fiantraikan'ny fanalana ny tsenan'ny saozaha any Bolivia. Amin'ity tranga ity dia nilaza izy fa nampiasa saozaha i Etazonia mba hanasazy ny firenena (ES) tsy misy kibay sy vato. Mitaraina ihany koa i Alexey noho ny fahaverezan'ity tsena manan-danja ity, nefa koa manantena fa tsy esorina amin'ny fomba toy izany ny dite coca. Ao amin'ny blaoginy Alexey Writes, manakiana ny fanambaran'ny minisitry ny raharaham-bahiny vaovao milaza fa tokony ho anisan'ny sakafo marainan'ny ankizy kely ny coca izy. Nolazainy manko fa nampiseho ny fikarohana roa vao haingana hoe tsy misy otrikaina amin'ity ravinkazo ity.
Amin'ny vaovao hafa, filoham-pirenena efatra teo aloha no voampanga ho nanao heloka bevava isan-karazany, toy ny fanaovana sonia fifanarahana tsy ara-dalàna amin'ny orinasan-tsolika ary koa famoahana balafomanga. Javier sy ny bilaoginy Una revisión de todo un poco (ES) manontany tena ny amin'ny antony mahatonga ny governemanta vaovao te-hitory ireo filoham-panjakana teo aloha ireo. Tsy misy afa-tsy lala-tokana sisa tavela amin'ny politika, tsy any amin'ny firenena intsony ny hafa efa misotro ronono. Nanoratra izy hoe: “Porofo fanampiny ity fa efa mandeha ny fiovana, na izany aza, ny mampatahotra dia tsy fantantsika hoe ho aiza nohizoran'izany (ES).”
Farany, Corry in Bolivia nanoratra ny diany tamin'ny bisikileta teny amin'ny “lalana tena mampidi-doza indrindra eran-tany” ao amin'ny faritr'i Yungas ao Bolivia ary nahita ilay sarimihetsika Boliviana-Amerikana “American Visa”, nalefan'ny namany tany aminy tamin'ny teny Espaniola ihany i Isabella ao amin'ny Ergoth's (ES) nony farany.